Fandraharahana mampientanentana mitranga ao amin'ny IMEX America
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Fandraharahana mampientanentana mitranga ao amin'ny IMEX America
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Novambra 11, 2021
Miroborobo ny fandraharahana ao amin'ny IMEX America
Mpanoratra Linda S. Hohnholz
"Ny maha-eto ahy dia manome tombony ahy amin'ny maha-ambony ny lalaoko sy afaka manome serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifako." Linda Lawson, mpividy mpampiantrano, avy amin'ny Achieve Incentives & Meetings any Ohio, dia mamintina ny tombontsoa ara-barotra roa manery ny famoahana farany an'ny IMEX America, izay atao any Las Vegas amin'izao fotoana izao.
Ny fahafahana ara-barotra mampientam-po dia natao tao amin'ny gorodona IMEX America.
Nilaza ny mpandray anjara iray tamin'ny fifandraisana efa naorina nandritra ny 10 taona, ny fampisehoana no fotoana tsara indrindra hihaonana mivantana sy hanao sonia ny fifanarahana.
Ny IMEX America dia hifarana anio alakamisy 11 Novambra ao amin'ny Helodranon'i Mandalay any Las Vegas, Nevada.
Ny gorodona fampisehoana no natao fandraharahana mampientam-po araka ny fanazavan'i Andrew Swanston, Lehiben'ny varotra, fihaonambe & hetsika ao amin'ny ExCel London: “Nahafinaritra ny andro omaly. Mpanjifa iray izay nanangananay fifandraisana nandritra ny 10 taona mahery no nofidiana Amerika IMEX ho toerana hanamafisana hetsika solontena 6,000 ho an'ny fikambanana ara-pitsaboana iraisam-pirenena amin'ny 2022 - ny fampisehoana no fotoana tsara indrindra hihaonana mivantana sy hanao sonia ny fifanarahana. "
Thomas Holland, mpividy nampiantrano, avy ao amin'ny Atlantic Coast Life Insurance any Carolina Atsimo, dia manampy hoe: “Miomana vondrona fandrisihana aho mandritra ny taona vitsivitsy ho any amin'ireo toerana any Eoropa sy Dubai ary manantena ny hanao sonia fifanarahana mandritra ny fotoanako eto amin'ny fitsangatsanganana renirano. any Eoropa.”
Ny fandaharana feno momba ny fanabeazana (200+ sessions) dia tena fisarihana goavana ihany koa araka ny fanazavan'ny mpividy nampiantranoina Frank Gainer, avy amin'ny American Occupational Therapy Assocation: “Ny fanabeazana no fitiavako ary mitantana ny fahafahana mianatra amin'ny hetsika ataoko aho. Eo am-pandinihana indray ny fomba fitantanana ny fampianarana amin'ny hetsikay izahay, izay manomboka amin'ny hetsika kely ka hatramin'ny fihaonambe isan-taona lehibe kokoa, ary nahazo aingam-panahy aho tamin'ny endrika Inspiration Hub an'ny fampisehoana.
Avy amin'ny "flawsome" mankany amin'ny flexibility
Ny fianarana tao amin'ny seho dia natomboka tamin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo mavitrika izay nandrisika ny mpanatrika ho "tsy misy dikany". Ao amin'ny Digital Leadership: The Five Habits to Success and Happiness in a Ever-Changing World, mpanoratra sady mpandahateny mandrisika Erik Qualman dia niresaka momba ny nahatonga ny flexibilité ho iray amin'ireo “hery lehibe vaovao”, indrindra tato anatin'ny roa taona. “Miorena tsara amin’izay alehanao, fa mahaiza mandanjalanja amin’ny lalanao”, hoy izy nanoro hevitra. Niresaka momba ny fomba fiatrehana ny “data, fanelingelenana ary fanelingelenana” ihany koa ilay mpampianatra nomerika mba handrafetana paikady nomerika ho an'ny hetsika iray izay manome firotsahana marina: “Atombohy amin'ny tsiky. Eritrereto hoe inona no hanome tsiky ho an'ny mpanjifanao ary hiverenanao avy eo. "
Noresahina tao amin'ny Let's End Discrimination Demographic, David Allison, mpanorina ny Valuegraphics, ny fandraisan'anjaran'ny hetsika amin'ny alàlan'ny fandavana ny demografika, ilay angona voalohany eran-tany noforonina manokana mba hanampiana ireo fikambanana haminavina sy hitarika ny fitondran-tena amin'ny fampiasana ny soatoavina ifampizaràntsika. "Ny demografika dia mamaritra hoe inona ny olona, ​​​​fa tsy ny fomba handraisana azy ireo," hoy izy. Any amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao, ny soatoavina ambony indrindra iankinan'ny olona dia ny Fianakaviana, ny Fitiavana, ny Fifandraisana, ny Finamana ary ny Fiaraha-monina. Nizara ny fomba fampiasana ireo soatoavina tena ilaina ireo i David mba hampitana hafatra fototra.
Natao tao amin'ny Inspiration Hub, fonenan'ny fampianarana ambony, Ny natioran'olombelona – fomba fijery telo no nahitan'ireo manampahaizana avy amin'ny Dear World, Human Biography ary TLC Lions nitarika fifanakalozan-dresaka ho an'ny vondrona momba ny fikarohana ny natioran'olombelona sy ny fiantraikany mahery vaika avy amin'ny fitantarana mba hampientanentana sy handraisana anjara. “Tsy mahatonga antsika ho tsy matihanina ny fitantarana, fa mahatonga antsika ho olombelona. Raha afaka miantso fiaraha-miory amin'ny maha-fahaiza-mitsikera isika, dia vao mainka ahafahantsika mamorona toerana ahafahana miasa, ”hoy ny fanazavan'i Gian Power avy amin'ny TLC Lions.
Ny Relaxation Reef dia nanome toerana milamina lavitra ny efitrano fampisehoana mba hialana sasatra sy hamelombelona eo anelanelan'ny fivoriana sy ny fotoam-pampianarana. Holly Duckworth avy ao amin'ny Leadership Solutions International dia mitarika fandaharan'asa fisaintsainana sy fisaintsainana.
Ny IMEX America dia atao ao amin'ny Helodranon'i Mandalay hatramin'ny 11 Novambra.
eTurboNews mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery ho an'ny IMEX America.
I Linda Hohnholz no tonian-dahatsoratr'izany eTurboNews nandritra ny taona maro.
Tiany ny manoratra ary mandinika ny antsipiriany izy.
Izy koa dia miandraikitra ny atiny premium rehetra ary ny famoahana gazety.